တရုတ် 0683386, 0683225, 1609871, 8-DF047701, 8-WPC0310 ရေစုပ် DAF ရေတွင်းရေစုပ်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအတွက်စျေးနှုန်းများ | ZODI အော်တိုအပိုပစ္စည်းများ
ရေနံရေ Sperator Bowl 20771578
0683386, 0683225, 1609871, 8-DF047701, 8-WPC0310 DAF ရေတွင်းရေစုပ်စက်အတွက်ရေစုပ်စျေးနှုန်းများ
ကားမော်ဒယ်: DAF အတွက်
Ref ။ အမှတ်:8-DF047701, 8-WPC0310
အခြေအနေ: 100% အသစ်
1609871 DAF အတွက် 8-DF047701
8-WPC0310 XF 85
အိုးမဟုတ်ဘူး နာရီအမှတ် ကိုးကားစရာ လျှောက်လွှာ
0506109 HH-TDF001 8-DF017701
8-WPC0280 DKS 1160
HH-TDF002 8-DF017702 DKS 1160
0682262 HH-TDF003 8-DF027701
8-WPC0290 DKS 1160
HH-TDF004 8-DF027702 DKS 1160
0680217 HH-TDF005 du 825
682264 HH-TDF006 8-DF127701 du 825
HH-TDF007 8-DF117702 du 825
1609871 HH-TDF008 8-DF047701
HH-TDF009 8-DF047702 XF 85
682980 HH-TDF010 403-7701 F85
0681653 HH-TDF011 8-DF037701
8-WPC0300 WS 242 L ကို
WS 268 L ကို
WS 315, G
HH-TDF012 8-DF037702 WS 242 L ကို
682747 HH-TDF013 8-DF057701 865 RS
HH-TDF014 8-DF057702 865 RS
1399336 HH-TDF015 8-DF067701
683338 HH-TDF017 8-DF077701 75 CF
683338 HH-TDF018 8-DF077702
1. OEM ထုတ်လုပ်မှုကြိုဆို: ထုတ်ကုန်, အထုပ် ...
၃။ သင်၏မေးမြန်းမှုအတွက် ၂၄ နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမည်။
4. သင်ပို့ပြီးသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်မရောက်မီနှစ်ရက်တခါသင့်အတွက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုခြေရာခံမည်။ သင်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရရှိသည့်အခါ၎င်းတို့အားစစ်ဆေးပြီးကျွန်ုပ်ထံပြန်လည်တုံ့ပြန်ပါ။ ပြyouနာနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ၊ သင့်အတွက်ဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းပါမည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုးကား, ဒါမှမဟုတ်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပစ္စည်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်ဒီဇိုင်းပေးပို့ခြင်း, ငါတို့ကပိုအသေးစိတ်ဆက်သွယ်ပါ။
စျေး၊ အချိန်၊ အနုပညာ၊ ငွေပေးချေမှုကာလကိုအတည်ပြုပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအားသည် Proforma ငွေတောင်းခံလွှာကိုတံဆိပ်ခတ်။ ပေးပို့ပါ၊
ကန ဦး ထုတ်လုပ်မှုအဆင့် - ကျွန်ုပ်တို့ငွေပေးချေမှုရရှိကြောင်းဖောက်သည်များကိုအသိပေးပါ။ သင်၏တောင်းဆိုချက်အတိုင်းနမူနာများကိုပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်၊ သင့်ခွင့်ပြုချက်ရရန်သင့်ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်နမူနာများကိုပေးပို့ပါ။ အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုစီစဉ်မည်ဖြစ်ပြီးခန့်မှန်းသည့်အချိန်ကိုအကြောင်းကြားမည်။
အလယ်အလတ်ထုတ်လုပ်မှု - သင်၏ထုတ်ကုန်များကိုသင်မြင်နိုင်သောထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုပြသရန်ဓာတ်ပုံများကိုပေးပို့ပါ။ ခန့်မှန်းပေးပို့ချိန်ကိုထပ်မံအတည်ပြုပါ
ထုတ်လုပ်မှုအဆုံးသတ် - အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဓာတ်ပုံများနှင့်နမူနာများသည်သင့်အားအတည်ပြုရန်ပေးပို့လိမ့်မည်။ တတိယပါတီစစ်ဆေးခြင်းကိုလည်းသင်စီစဉ်နိုင်သည်။
သင်ကုန်ပစ္စည်းကိုလက်ခံရရှိပြီးသူတို့နှင့်ကျေနပ်သောအခါ“ အပြီးသတ်” ဟုပြောနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေး၊ ၀ န်ဆောင်မှု၊ စျေးကွက်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်နှင့်အကြံပြုချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်ချက်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။
Ningbo ZODI Auto Spare Parts Co. , Ltd Zhejiang, Zhejiang, Ningbo မှာတည်ရှိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကိုကျွမ်းကျင်သောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများဖြစ်ပါသည်။set ကိုဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ ဖက်ရှင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုစီးနင်းသည်။
A: ယေဘူယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုကြားနေအဖြူသေတ္တာများနှင့်အညိုရောင်ပုံးများဖြင့်ထုပ်သည်။ သင်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်မူပိုင်ခွင့်ရှိပါက,
Q2 ။ ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကဘာလဲ။
A: အပ်ငွေအဖြစ် T / T က 30% နှင့်မပို့မီ 70% ။ ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အထုပ်များ၏ဓါတ်ပုံများကိုပြပါမယ်
ဖြေ။ ။ EXW၊ FOB၊ CFR၊ CIF၊ DDU ။
A: ယေဘူယျအားဖြင့်သင်၏ကြိုတင်ပေးငွေကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် ၁ ရက်မှ ၁၀ ရက်အတွင်းကြာလိမ့်မည်။ တိကျသောပေးပို့အချိန်ပေါ်မူတည်သည်
Q5 ။ သင်နမူနာအရထုတ်လုပ်နိုင်ပါသလား?
Q6 ။ သင့်ရဲ့နမူနာမူဝါဒကဘာလဲ?
A: ကျွန်ုပ်တို့တွင်သိုလှောင်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများရှိပါကနမူနာကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့နိုင်သည်။ သို့သော်ဖောက်သည်များသည်နမူနာကုန်ကျစရိတ်နှင့်курьерကုန်ကျစရိတ်ကိုပေးရသည်။
ဖြေ ၁ ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအကျိုးခံစားရစေရန်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ရှေ့သို့ MAN TGA 81252256545 81252256544 FOR Hot Sale အမြီး LAMP
နောက်တစ်ခု: DAF Truck ကားများအတွက် 1305481 1305482 တံခါးလက်ကိုင်
DAF Truck ကားအလင်းအာရုံခံ 501210058 အတွက်
DAF ကုန်တင်ဖိနပ်ဘရိတ်ဖိနပ် 1246531 (180mm7...
DAF Truck ကားများအတွက် 1603689 Wiper ချိတ်ဆက်မှု
0091647 SOLENOID Valve DAF
Volvo Renault ကုန်တင်လေယာဉ်စုပ်ယူမှု ...
DAF ကုန်တင်ယာဉ်အတွက် 1261350 Wiper ချိတ်ဆက်မှု